ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၉) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၉)
ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၉)
Posted by asiamasters on Aug 23, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, History | 17 comments
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ လောက်က ရန္တပိုစာချုပ်အပြီးမှာ အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တို့က သိမ်းပိုက်ထားပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။ မအူပင်မြို့မှာ ထောင်တစ်ခုရှိပါတယ်။ မအူပင်ထောင်ရဲ့ ထောင်မှုးဖြစ်သူဟာ ပေါ်တူဂီလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဒေသခံမြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ အကြောင်းပါပါတယ်။ သမီး (၇) ယောက်ထွန်းကားပါတယ်။ အငယ်ဆုံးသမီးလေးဟာ ပေါ်တူဂီကဗျားမလေးဖြစ်တာမို့ အလွန်ချောမောလှပပြီး ရတနာပုံနေပြည်တော်မှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ဆရာလေးတစ်ဦးနဲ့ အကြောင်းပါပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရာသားကျပြီးချိန်မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူနေပြည်တော်မှာလိုက်နေပါတယ်။ သားလေးနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးက မောင်ဘသော်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ဦးမှာ မောင်ဘမော်ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ မြင်ကွန်းမင်းသားနဲ့ မြင်းခုံတိုင်မင်းသားကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရပါတယ်။ မိသားစုဘ၀လေးဟာအလွန်ကို အေးချမ်းသာယာနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာ မမျှော်မှန်းထားတဲ့ ကြမ္မာဆိုးကြီးကျရောက်လာပါတော့တယ်။
မြင်ကွန်း၊ မြင်းခုံတိုင် အရေးအခင်းလို့လူသိများပါတယ်။ မြင်ကွန်းမင်းသားနဲ့ မြင်းခုံတိုင်မင်းသားနှစ်ပါးက အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းခြင်း မအောင်မြင်ပါ။ မင်းသားနှစ်ပါးနဲ့ နောက်လိုက် နောက်ပါ အားလုံးထွက်ပြေးကျရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်က သိမ်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ဘက်ကို ထွက်ပြေး လာကြ တာများပါတယ်။ သူတို့နောက်မှာတော့ မြန်မာမင်းရဲ့ လက်မရွံ့လူသတ်သမားများ လိုက်လာနေလေပြီ။ ရန်ကုန်မှာလည်း ထွက်ပြေးလာသူများမှ တစ်ချို့ လူမသိသူမသိအသတ်ခံရပါတယ်။ ပထမပိုင်းတော့ အင်္ဂလိပ်ဆရာလေးဘာမှ မသိပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ အင်္ဂလိပ်ဆရာလေး မဟုတ်တာတွေသင်ပေးလို့ မင်းသားတွေခြားနားပြီဟု အထင်ရှိပုံရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဆရာလေးကိုပါ တွေ့ရာသင်းချိုင်းဒါးမဆိုင်းပဲသတ်စေဆိုတဲ့အမိန့်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီသတင်းကို နဲနဲကြိုသိလိုက်တော့အင်္ဂလိပ်ဆရာလေးလဲ ဇနီးသည်နဲ့ လူမမယ်ကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုဆွဲပြီး ရန်ကုန် အရောက် ပြေးလာခဲ့ ပါတယ်။ ရန်ကုန်သို့ရောက်သော်လည်း လုံခြုံရေးကစိတ်မချရပါ။ သို့နှင့် ယိုးဒယားဘက်ထိ ကူးမယ်ဆိုပြီး ရန်ကုန်ကနေ ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးနဲ့သားငယ်နှစ်ဦးကိုတော့ ရန်ကုန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်မှလာခေါ်မယ်လို့စီစဉ်ပုံရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခင်ပွန်းနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာ ကွဲကွာသွားကြပါတယ်။ ဇနီးသည်ဟာလည်း ကြောက်လန့်တကြားရှိတာနဲ့ သားလေးနှစ်ဦးကို စိန်ပေါကျောင်းမှာသွားအပ်ပါတယ်။ စိန်ပေါကျောင်းဆိုတာက ယခု အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှာရှိတာပါ။ ၀န်ကြီးများရုံးနဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိပါတယ်။
စိန်ပေါကျောင်းဆိုတာက အလွန်နာမည်ကြီးခဲ့သည့် ခရစ်ယာန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ဘမော်နဲ့ မောင်ဘသော်လေးဟာ အမေဖြစ်သူက စိန်ပေါကျောင်းမှာ အပ်ထားခဲ့တော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်လေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ထူးချွန်မှုတွေကိုပြနိုင်ခဲ့တော့ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို စေလွှတ်ခံရပါတယ်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတက္ကသိုလ်ချင်းတော့မတူပါ။ တစ်ဦးက Oxford ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ဦးက Cambridge ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးဟာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရပြီးချိန်မှာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များပြန်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ဘမော်ဟာ အင်္ဂလန်ကနေပြင်သစ်ကိုဆက်သွားပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဘော်ဒိုးတက္ကသိုလ်ကနေ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ ပါတယ်။ ဒေါက်တာဘွဲ့ရပြီးချိန် ဒေါက်တာဘမော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီး ပုဇွန်တောင်မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ဖိုးသူတော်ဝတ်နဲ့ ကပ္ပိယလလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဒေါက်တာဘမော်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးရန်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ ဆရာစံ အရေးတော်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာစံအဖမ်းခံရပါတယ်။ ဆရာစံဘက်က ရှေ့နေလိုက်မဲ့သူမရှိပါ။ အားလုံးက နောက်ဆုံးတော့ ကြိုးပေးမှာပဲလို့သိထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါက်တာဘမော် ဆရာစံရဲ့ ရှေ့နေအဖြစ်နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထုချေလွှာဟာ ရေပက်မ၀င်အောင်ကောင်းတဲ့အတွက် တရားသူကြီးများ အလွန်အခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆရာစံကိုကြိုးပေးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာစံကိုသတ်ခဲ့တဲ့နေရာက သာယာဝတီထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေပြည်ကို သွားမယ်ဆိုရင် သာယာဝတီမြို့အလယ်လောက်ရောက်ရင် ညာဖက်လမ်းချိုးလေးထဲ ကားမောင်းဝင်သွားလိုက်ရင် သာယာဝတီ ထောင်ကိုရောက်ပါမယ်။ သာယာဝတီထောင်ကို ၀င်ဝင်ခြင်းညာဖက်မှာ ထောင်မှူး အိမ်ရှိပါတယ်။ ထောင်မှူးအိမ်ရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဆရာစံအရေးတော်ပုံတုန်းက ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကုလားစစ်သားတွေကို မြုပ်နှံထားတဲ့ သင်္ချိုင်းအုတ်တိုင်လေးတွေရှိပါတယ်။ ဆရာစံကိုကြိုးပေးခဲ့တာက ထောင်ရဲ့ အနောက်မြောက် ထောင့်ကြီုးစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာစံအရေးတော်ပုံအပြီးမှာတော့ ဒေါက်တာဘမော်ဟာ နာမည်ရလာပါတယ်။ ဆင်းရဲသားပါတီကို စတင်ထူထောင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ Proletariat Party လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားဆိုတာမျိုးသုံးလာပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဒေါက်တာဘမော်ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။ ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
မြင်ကွန်းမင်းသားနဲ့ မြင်းခုံတိုင်မင်းသားနှစ်ပါးရဲ့.. အနွယ်တော်တွေ..တော်တော်များများ… ပြင်သစ်အကူအညီနဲ့.. (အဲဒီတုံးက ပြင်သစ်ကိုလိုနီ)ဗီယက်နမ်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတာပါ..။
အားလုံးလိုလို.. ဗီယက်နမ်တွေနဲ့..အကြောင်းပါကုန်ပြီး.. မြန်မာပြည်ကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ..တော်တော်များများ ပြန်လာကြတယ်…။
သထုံမှာပြန်နေကြတယ် သိရပါတယ်..။ ဗီယက်နမ်တွေလည်းပါလာတယ်တဲ့..။ ဘာရယ်မဟုတ်..ဟိုတလောက..”နိုင်င်ငံကိုစွန့်ခွာခြင်း”ဆောင်းပါးထဲ.. အနွယ်တော်တွေအကြောင်းရေးထားတာ တွေ့မိလို့..ဆက်စပ်ရေးပေးတာပါ..။
ယူအက်စ်မှာ.. အနွယ်တော်တွေရှိနေတာမို့.. အင်တာဗျူးလိုက်တာ..။
ကွန်မြူနစ် ၀ါဒ ကလည်း တော်တော် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
မြန်မာပြည်မှာ သိပ်ပြီး မတွင်ကျယ်ခဲ့လို့ တော်သေးတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားမှာတော့ မြေပုံပဲ ကျန်တဲ့ အထိ ပိုပေါ့တို့ ဆိုးခဲ့တာ.. ကြားဖူးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကွန်မြူနစ် ဆိုတာ အနည်းအကျဉ်းတော့ လေ့လာမိခဲ့တယ်။
သြော်…ဆူးရယ်..။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒက မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ်ပြီးမတွက်ကျယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ အထိဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ Politic နဲ့ Economic အခြေအနေတွေက ဒီကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့ အရိပ်အငွေ့တွေ ရှိနေဆဲပါပဲ။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒအကြောင်းဆက်ရေးပါဦးမယ်။
ကွန်မြူနစ် ဆန်တာတွေ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ရေးပေးဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
တနေ့ နည်းနည်း ရေးတော့ ကျောင်းသင်ခန်းစာလိုပဲ ဖြေးဖြေးချင်း မှတ်ရတော့ ဦးနှောက်ထဲ မလျှံသွားတော့ဘူး။ ကောင်းတယ်။ ပိုမှတ်မိမယ် ထင်တယ်။
Asiamasters, like this post and it let us know the history of Burmese politics that we didn’t hear before. I would like to suggest that you would better compile all these data to becomeaconsolidated one and disseminate it out.
ကွန်မြူနစ်တကယ်စစ်ရင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး၊ အေပြာအဆိုအနေအထိုင်သိမ်မွေ့နူးညံ့တာကြုံဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရက်စက်ရင် ဘယ်သူမှလိုက်မမှီပါဘူး။ ညစ်တဲ့လူမျိုးလဲတွေ့ဘူးပါတယ်။ သခင်သန်းထါန်းလက်ထက်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်များဟာ စိတ်ထားနူးညံ့သိမ်မွေ့ကြသူတွေပါ။ သိန်းဖေမြင့်ကိုကြည့်ပါ။ အပြောနူးညံ့ပေမဲ့၊ သူသွားလေရာနေရာအုပ်စုကွဲလေ့ရှိပါတယ်။
ဒေါက်တာဘမော်က ဆင်းရင်းသားပါတီထူထောင်တာကိုတော့ကြားဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ရဲ့ဝါဒကသူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ မကြားခဲ့ဘူးသေးပါ။ ဟုတ်ရင်တော့ မှတ်သားစရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာပါဘဲ။
ပြောရရင်တော့ ဦးနေဝင်းတို့ ဦးသန်းရွှေတို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုတွေဆိုတာ ကူမြူနစ်တွေဗျ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တိုင်းပြည်ကို ဆင်းရဲသွားအောင်လုပ်လို့။ ပေါက်ကရပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ ကူမြူနစ်အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှန်သမျှ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေချရင်း ဆင်းရဲမွဲတေ စုတ်ပြတ်သွားလို့…။ တရုတ်ပြည်တောင်ကြည့်ပါလား ကူမြူနစ်မစစ်တော့မှ ချမ်းသာလာတာ..။ လေးစားပါတယ် ရဲဘော်ဗိုလ်မှူး..။
အိမ်က.. စာအုပ်ပုံရဲ့တဂျောင်ဂျောင်မှာ.. ဆင်းရဲသားပါတီရဲ့.. ဒေါက်တာဘမော်ကနေ..ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို.. အပုပ်ချထားတဲ့စာအုပ်သေးသေးလေးရှိတယ်..။ တခါဖတ်ကြည့်ပြီး.. တော်တော်အံ့သြသွားလို့..မှတ်မိနေတာ..။
ကျွန်မတို့လို လူငယ်တွေအတွက် ကွန်မြူနစ်ဝါဒဆိုတာ ဘာလဲလို့ အပ်ကျမတ်ကျမသိပါ
အဲဒါကို နားလည်လွယ်အောင် နောက်ပိုစ့်တွေမှာ သေချာရှင်းပြပေးပါ
လက်ယာ၊ လက်ဝဲဆိုတာလည်း သေချာမသိပါ
ကွန်မြူနစ်က လက်ဝဲလမ်းစဉ်လို့တော့ ကြားဖူးပါတယ်
အဲဒီလက်ယာ၊ လက်ဝဲအကြောင်းလေးလည်း ထည့်သွင်းပြီး ရှင်းလင်းစေချင်ပါတယ်
ပြီးတော့ မဆလခေတ်အကြောင်းလေးလည်း အဆင်ပြေရင်ပြောပေးပါ
မဆလခေတ်မှာ မှော်ခိုပေါတာ၊ ပြည်သူတွေ ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ဖို့ ခက်ခဲတာ၊ အစိုးရက အားလုံးချုပ်ကိုင်ထားတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်
လာမည့် အခန်းဆက် Post များအား မျှော်လင့်စောင့်စားလျက်..။
ကျွန်တော် တောထဲကိုရောက်နေတာ ကြာသွားလို့အရင်ကပို့ စ် တွေမဖတ်လိုက်ရဘူး ဘယ်မှာ ရှာဖတ်ရပါမလဲ? ကျွန်တော်မန်ဘာအသစ်တစ်ယောက်မို့သိပ်မသိလို့ ပါ.
asiamasterကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆက်ပြီးရေးပေးပါဦး
၂) အပေါ်ခေါင်းစဉ်( Title)အောက်ကပ်ရက်မှာ.. Posted by asiamasters on Aug 23, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, History | 14 comments ရှိပြီ.. အဲဒီက.. Category > Aung San/Aung San Suu Kyi ကို ကလစ်လုပ်.. ဆိုင်တဲ့ Category အောက်ကစာတွေရွေးဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
၃) စာရေးသူအကြောင်း (About asiamasters) အောက်နားလေးမှာ View all posts by asiamasters →ဆိုတာကို ကလစ်လုပ်ပြီး အဲဒီစာရေးသူတဦးထဲက ရေးခဲ့တဲ့..စာတွေအကုန် တစုတဝေးထဲပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
ရွာသားတွေထဲက ၀ါရင့်တဲ့..တယောက်ယောက်က.. ပို့စ်တင်ပုံတင်နည်း.. စာတွေရှာဖွေ… ဖတ်ပုံဖတ်နည်း ပြုစု ရေးပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်..။
ရှာနည်း ဖတ်နည်း ရေးနည်း ပို့စ်တင်လိုက်မယ်..။ ကူကြပါဦး…
tarnawyakkha ကိုတော့ ဒီ site ရဲ့ admin နဲ့ဆက်သွယ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ကိုတော့ ဘာမှ နားမလည် ပါ
အေးရှားမာစတာ ရေးတဲ့ ပို့ စ်တွေ က တော့
ကိုယ့်နိုင်ငံ သမိုင်းအကြောင်း တွေ ကို သိရှိစေရတာမို့ 